ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်ကို ဇွန် ၁၀ ရက် ညပိုင်းတွင် တိုင်းသံဃနာယက ဆရာတော်များ ဦးဆောင်၍ အင်အားသုံး ၀င်ရောက်စီးနင်း ချိတ်ပိတ်ခဲ့
မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်ကို ဇွန် ၁၀ ရက် ညပိုင်းတွင် တိုင်းသံဃနာယက ဆရာတော်များ ဦးဆောင်၍ အင်အားသုံး ၀င်ရောက်စီးနင်း ချိတ်ပိတ်ခဲ့
လက်နက်အားကိုး အာဏာရှင်စနစ် မှာ ဒီလောက် မွေ.လျော် နေ.တဲ.အဖွဲ.အစည်းက ၂၀၁၅ ရှုံးရင်
အာဏာစွန်.မယ်ဆိုတာ ချင်.ယုံကြပါ ။
* ဆင်. ဟိုဒင်း ခွေးမျှော် ဖြစ်နေမှာစိုးသဗျို. ။
မအလ တွေ မင်းတို့ကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီး..
စိတ်ဓာတ်ပိုင်း၊ စည်းကမ်းပိုင်း၊ ကျင့်ဝတ်ပိုင်း အားလုံး မြောင်းထဲရောက်ကုန်ပြီ။ သောက်ရှက်ကို မရှိတဲ့ ကလိန်ကကျစ်တွေပဲကွာ။